Hawo onkod wadata oo la saadaalineyo Sabtidan iyo Axadan 27-28 luulyo. - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Biriq iyo daruur ka muuqato cirka. Alain Jocard/scanpix
Hawo onkod wadata oo la saadaalineyo Sabtidan iyo Axadan 27-28 luulyo.
La daabacay fredag 26 juli 2013 kl 16.58
Daruur, roob xoog badan iyo halista ah in guguc ayaa jirta fasaxa toddobaadkan eemaalimaha Sabti-ga iyo Axada haddi aan amino Marcus Sjöstedt oo ka how gala hay’ada saadaasha hawada ee SMH.
Ka dib markii dhowrkii cisho ee toddobaadkan ayna soo martay cimilo cad ceed iyo kuleyn oo laga dareemay qeybo badan oo dalka ka mid ah, ayaa hadda waxaa soo dhacday warbixintan saadaasha hawada ee ka hadleysa guguc, roob iyo daruur ee labada maalin ee fooda inagu soo haya.
– Waxaa heleynaa hawo badan laakiin qoyaan wadata marka qeyb daruur ah ayaa soo muuqan kara, ayuu yiri Marcus Sjöstedt oo ka jeediya idaacadda Iswiidhen saadaasha hawada .
Dhanka waqooyi ee dalka, cirka waxaa lagu wadaa in uu noqdo mid iftiin ah labada maalin ee sabtiga iyo axada. Koonfurta ugu shisheeysana, wax xoogaa daruur ah.
Ka waran guguca?
– Waa guguc ama onkod sarreeya, waxa aan ugu yeerno guguca kulul. Micanaheedu waa cadceeda ayaa qaban doonta dhulka hawada kor bay u kici doontaa, aakhirkiina onkod ama guguc ayaa bilaabanaya, ayuu yiri Marcus mar la weydiiyay su’aal..
Ma loo baahanyahay roob?
– Haa, dhanka koonfureed ee dalka abaar baa ka jirta marka waa loo baahnyahay wax meesha ka saara halista ah in uu bilowdo dab laakiin roobka saameyn kumalahan aratida dheer, ayuu sii raaciyay Marcus Sjöstedt hadalkiisa.
Roob iyo cimilo wadata guguc ayaa goor hore ku dhugftay deegaanka Ryhov waxayna idaacadda P4 qeybteeda Jönköping ku warameysaa in daadad ay galeyn cisbitaalka Jönköping. Lo’ iyana gaareysa kow iyo toban ayaa xalay ku dhintay biriq ku dhacday daafaha gobolka Dalarna.